Otu esi eme ka ndi oru ngo di nma site na iji oru oru ngo - ITS
Nkà na-ahụ maka Ụlọ Ọrụ:Isi okwu nke otu onye nchịkwa na -PM) na-arụ ọrụ na nghazi ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ bara uru ma ọ bụ na-arụ ọrụ na-eme ka ndị ọrụ ibe gị rụọ ọrụ a na-ajụ na ihe ọ bụla nchịkwa ọ bụla m gwara.
Imirikiti mkpakọrịta 'n'ime ọrụ na-arụ na ụfọdụ ụdị ọrụ enyemaka, netwọk na-adịghị ike ma ọ bụ usoro nlekọta nhazi usoro. Nke a pụtara na ndị ọrụ ibe ha na-aza onye nduzi bara uru nke na-elekọta ọrụ ha, nyocha ndị e mere, nwelite, ụgwọ ọrụ, na ihe ndị ọzọ. Ruo ugbu a, PMenweghị obere onyinye ọ bụla n'ime usoro ndị a.
Ihe mbụ m mere maka PMNdị na - ebute n'ọnọdụ a bụ ịchọta ihe Ụlọ Ọrụ Management Project (PMI) chọrọ iji kwuo maka ọkachamara nke PM. Nke a nwere ike ịchọta na 283 na 284 na A Guide to Njikwa Ihe Omume nke Ụlọ Ọrụ (PMBOK® Guide)- Nkeji abuo. Na PMBOK® Ntuziaka na PMs na-eji ngwakọta nke ndị ọkachamara, onye, ​​na njikọl njikọ kwadoro ya na ndị nlekọta na-elekọta ya. SMEs atụ aro ka PMs kwado ikike atọ ma ọ bụ akụkụ maka ihe:
Ngwá ọrụ Nchịkọta 3 na-arụ ọrụ iji melite ọrụ Team Team
1. Bụrụ onye ọsụ ụzọ
2. Ghọta ihe
3. Bụrụ onyeisi
Mmetụta mmekọrịta ọha na eze - PMs nwere ike imetụta mmetụta nke ndị ọrụ ibe gị, nkwubi okwu na omume. Ndị PMs nwere ike iji mmetụta ndị mmadụ na-enwe site n'ọtụtụ echiche, dịka ọmụmaatụ, nkwekọrịta, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịdị arọ nke ndị ọgbọ, ịrụ ọrụ na mmetụta iji metụta ndị ọrụ ibe ha ga-arụ.
Mee nrọ - Ndị PMs ga-enwe ike ịhụ ngwaahịa ikpeazụ. Ndi PMs enweghi ike inye nduzi na njem ha n'amaghi ihe mgbaru ọsọ.
Debe ihe - Ndị PMs nwere ike igosipụta n'eziokwu na doro anya ebe ìgwè ahụ na-aga ma nye ntụziaka maka ụzọ kachasị mma iji rute.
Na - PMs chọrọ inweta ihe na-aga. Ndị ọrụ ibe nwere ike iwepụta ihe ole na ole, dịka ọmụmaatụ, ime ka ndị mmadụ nwee ike ime ihe, jupụta ndị mmadụ na ọchịchọ ha iji nweta ihe ma na-enye echiche banyere ịrụ ọrụ.
Mentor / Mkpali - PMs nwere ike ịkụziri ndị ọzọ ma kpalie ndị ọzọ. Ha nwere ike inye ọzụzụ ma ọ bụ ọganihu iji kwado ndị ọrụ ibe ha site n'ịkwado ha n'ịmezu ebumnuche ọ bụla. Ha nwere ike ịkekọrịta ihe, nye ndụmọdụ, nye ntụziaka na ịkekọrịta ọrụ ha.
Nyere ma kwusi ndị ọzọ - Ndị PMs ga-enye nkwado ma kwadoro ịkwado ndị ọrụ ibe ha na mgbalị ha iji rụzuo ebumnuche ọ bụla. Nke a na-eziga ozi na mmezu nke nsonaazụ ndị ọzọ ga-abụ ọkachamara site na mmekota. PMs bolster na-agbatị ndị ọrụ ibe ya, ma si otú a, gbasaa ndị ọrụ ibe ha ịkwado ha.
Mezuo ebumnuche ndị - PMs setịpụrụ ebumnuche ndị nwere ike ịchọpụta ma nwee ngwaahịa ikpeazụ. Ihe mgbaru ọsọ nwere ike inwe ma ọ dịkarịa ala otu ihe mgbaru ọsọ iji mezuo n'ime oge a kara aka. Nke a na - enye ndị ọrụ ibe ha mmetụta nke inwe ebe.
Njikwa na ichikota ndị ọzọ - PMs na-edu ìgwè ahụ site n'inye nduzi, ụzọ na agbamume. PMs pụtara ma kọwaa ihe, mgbe, ebe, na otú.
Na-eme ka obi sie gi ike - PMs nwere ike ikwenye. A na-etinye usoro a iji gbanwee echiche nke uche maka oge site n'iji ya eme ihe ma ọ bụ kwuo okwu ma kwesiri inwe ike itinye data, mmetụta, iche echiche ma ọ bụ ngwakọta nke ndị a.
Echiche na-enweghị mgbagwoju anya na-elekwasị anya / ọnọdụ - PMs kwesịrị ikwupụta echiche n'echiche, n'ụzọ doro anya na site n'itinye aka n'ụzọ doro anya.
Jiri nlezianya doro anya - PMs kwesịrị ilekwasị anya na ihe a na-ekwu ma ọ bụghị naanị "ịnụ" ozi nke ọkà okwu ahụ. Site n'ile anya, PM ga-enwe ezigbo mkpa nke mkparịta ụka ahụ. Enwere ike iji nke a gosipụta nkwanye ùgwù maka ọkà okwu, nke ga - enyere aka n'inwe nnukwu mmekọrịta na ndị ọrụ ibe.
Iche echiche / Icheta ọnọdụ dị iche iche - Ndị PMs ga-echebara onwe ha echiche ma chee echiche kwesịrị ekwesị ka ndị ọrụ ibe ndị ọzọ na-elekwasị anya. N'ime ime otu a, PM ahụ gbasaa agbakwunye otu site na izipụ ozi ahụ ọ na-atụle ihe njide na ihe ọmụma nke ndị mmekọ.
Adreesị dị ezigbo mkpa - Ndị PMs ga-eji ike ha ghọta ọdịiche dị n'etiti nsogbu dị mkpa site n'aka ndị na-adịghị mkpa ma ọ bụ ndị dị egwu. N'okwu a mgbe òtù ndị ọrụ ahụ na-ahụ ike a, ọ na-eme ka ha mara na ihe gbasara PM.
Nweta nkwenye - PMs ga-akpọrọ onye ọ bụla gụnyere ndị ọrụ ibe ya. Ndị PMs kwesịrị iji ikike ha mee iji nweta nkwenye na ndị si n'otu echiche dị iche iche iji metụ aka na nghọta.
Nata ihe asatọ a iji dozie ihe kachasị mma ị ga - eme:
Kwesiri iche ma kpochapụ nsogbu ahụ.
Kpebie ụzọ nke esemokwu ahụ ma mebie ya n'ime obere akụkụ.
Mee atụmatụ, tinye data ma gbanwee ya na data.
Binye / dozie / kpokọta / abridge data ma jiri ya mee nke ọma.
Ghota ma jiri nruochi di omimi iji kpebie uzo zuru oke iji kpebie nsogbu a dika oburu na oge na ihe abughi ihe di nkpa.
Họrọ ma ọ bụrụ na ịnweta data ga-enyere enyemaka aka.
Tụlee akụkụ ka ukwuu nke nhọrọ ndị ahụ; họrọ onye nke na-edozi ndokwa zuru okè.
Mee nhọrọ ahụ; leba anya n'otú usoro ndokwa ahụ si dozie nsogbu ahụ.
Iji nchịkọta nke nchịkwa, mmetụta na nduzi mmekorita nke isi na-eme ka ọ dịkwuo ike inwe nchịkwa nke onye nchịkwa nwere ike inwe mmeri nke otu. N'ebe ahụ mgbe ndị ọrụ ibe na-ahụ onye nlekọta na-ahụ maka ọrụ na-eji ihe niile gbara ya gburugburu, gosipụtara ma kwụ ọtọ, ụzọ ha na ịzụ ihe maka akụkụ ahụ na ịmepụta ga-ejupụta.